Ifomula lebantwana labantwana abanezidingo ezikhethekile
Wonke owesifazane uyazi ukuthi ubisi lwebele lungumntwana luwusizo kakhulu. Akugcini nje ukugqugquzela ukwakheka kahle kwesimiso somzimba sokuzivikela, kodwa kungcono kakhulu ukuthatha ingane. Nokho, akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi owesifazane ukuba ancelise ngesifuba. Lokhu kungaba izizathu ezihlukahlukene: ukungabi nobisi, izifo nokunye okunjalo. Ngakho-ke, ezimweni ezinjalo, izingxube zezingane ziyasiza.
Kukhona inqwaba yezingxube zezingane, kodwa akuzona zonke izinsana ezivumelanisa okufanayo. Ezinye izimpumputhe zidinga ukudla okhethekile ngenxa yempilo noma isimo somzimba. Ngokwesigaba salezingane ezinjalo, odokotela bamazinyo abadokotela bamazinyo baye bahlakulela izingxube zezingane ezikhethekile: i-lactose-free futhi yokwelapha. Kulesi sihloko sizobheka ngokuningiliziwe. Futhi sizobe sitshele ngabakhiqizi abakhulu bezingxube zezingane.
Izingxube zokudla ze-Lactose
Kwenzeka ukuthi umama onjalo unobisi obanele, kodwa ingane itholakale ingenakubekezela. Ngokujwayelekile lokhu kwenzeka ezimweni ezimbili:
Uma ukwelashwa ubisi lwebele - lokhu kwenzeka kuma-5% wamacala.
Ngokwehluleka okukhulu kwe-lactose emincintiswaneni.
Uma ngabe ubhekene nokubhekana nenkinga enjalo, kuzomele ukhumbule ukuthi ingane encane kunoma yiliphi icala akufanele linikezwe ubisi lwebele noma ingxube yezingane ezivamile. Uma umntwana ene-lactose engenakwanele, kufanele ahlinzeke kuphela amaxube aphansi-lactose noma ifomula elingenayo i-lactose. Uma uqhubeka ukondla ingane yakho ngezingxube ezivamile ze-lactose, maduzane izinkinga zempilo ezinzima zivela. Ngakho-ke, izingxube ze-de-lactose azigcini kalula ezimweni ezinjalo.
Uma ingane isela ubisi lomama, ke okokuqala abazali kufanele badluliselwe kudokotela wezingane, ukuze athole imvuthuluka ingxube engeke ibangele ukusabela komzimba. Kufanele kuqaphele ukuthi ingxube enjalo ayikwazi ukuba yinhlanganisela eyabizayo yesizukulwane esisha, kodwa ingxube evamile kakhulu njenge "Baby".
Ngokuvamile ezikhathini ezinjalo, abazali bezingane zinikeza ukudlulisela ingane emathanjeni amancane hhayi ngesisekelo sobisi, kodwa ngesisekelo soy. Ngendlela yayo ehlanzekile, isobho siyasiza kakhulu emzimbeni womuntu, ngenxa yokuthi iqukethe amaprotheni. Ngakho ukwakheka kweprotheyini ye-soy kufana kakhulu neprotein yamaprotheni, kodwa ngokungafani ne-sweet, ayinayo i-cholesterol. Yiqiniso, i-soya inezinkinga ezithile. Okuyinhloko yalezi zingqinamba ukuthi leyo soy iqukethe into evimbela ukuhlenga kwamaprotheni. Kodwa ifomula lesana, elenziwe ngesisekelo soy, lithintekile le nkathazo. Futhi konke ngenxa yokuthi ingxube kumele ihlanjululwe ngamanzi ashisayo, okubhubhisa le nto.
Enye i-soy minus yukuthi ekubunjweni kwayo kunezitshalo ezithile, ezitshengiswa emathunjini amakhulu emvuthu. Lokhu kuholela ekubukeni kwezibonakaliso ezingathandeki kakhulu: ubuhlungu esiswini, ukubhubhisa, ukulala.
Ukuze kusetshenziswe amakhemikhali ebisi lactose angenayo mahhala asekelwe amaprotheni we-soy, kuphela ukusetshenziswa kwamaprotheni ahlanzekile. Kuyinto engcono esikhundleni senkomo yenkomo nobisi lomuntu. Izingxube ezinjalo ekubunjweni kwazo aziqukethe igramu ye-lactose, yingakho zilungele izinsana ezinomdlavuza we-lactose.
Eminyakeni yamuva, iningi labantu liphikisana nemikhiqizo ye-genetically modified. Eminye yale mikhiqizo ihlanganisa soy. Ngakho-ke, abazali abaningi benqabe ukunikeza umntwana ubisi lwe-lactose mahhala ngokusekelwe kwesoya. Kodwa ukwesaba okunjalo akusekho ngokuphelele. Yonke imikhiqizo eyenziwe kusuka kwesoyiya ilawulwa ngokuqinile kakhulu kwekhwalithi. Futhi izingxube zezingane zisengaphansi kokubhalisa nokuqinisekiswa. Zonke amafomula ezinsana zivivinywa kahle: izakhiwo ze-soygen, isakhiwo se-DNA ye-soya kanye nesakhiwo se-mutagenic soy.
Ngemva kokuba ifomula lesana lizohamba ngezinyathelo ezintathu zocwaningo olunjalo, uMnyango wezeMpilo uzonikeza imvume yokuthi imikhiqizo idayiswe. Ngakho-ke, ukuthenga umthamo wobisi kumntanakho, ungaqiniseka ngokuqinisekile ukuthi akukho monakalo ozovela kumkhiqizo.
Kuzingane ezihlukunyezwa i-lactose, amafomu wezingane asekelwe ngobisi lwezinkomo nawo afanelekile. ERussia, ukuxuba okufana nobisi lweNanni, okwenziwa eNew Zealand, kuthandwa kakhulu. Izingxube zikaNanni zingu-hypoallergenic futhi zenziwe ngesisekelo sobisi lwezimbuzi. Izingxube ezinjalo azifanelekile kuphela kulabo bantwana abane-lactose ukungabekezelelani, kodwa futhi nabantwana abaphilile ngokuphelele. Okunye okufana nale nhlanganisela kufaneleka kakhulu ezinganeni ezithandana ne-atopic dermatitis. Kunezinhlobo eziningana zalezi fomula zobisi. Ziyinto engavamile futhi ecebise ama-prebiotics. Ngaphambi kokukhetha lokhu noma leyo nhlanganisela, thintana nodokotela wezingane.
Usana lomuthi lwezokwelapha
Izingxube zobisi zezingane zisiza hhayi kuphela ukuhlinzeka ngomzimba ngezimbombo zazo zonke izinto ezidingekile, kodwa futhi zisiza ukuxazulula ezinye izinkinga ngempilo. Abakhiqizi bamanje bezingxube zezingane bakhiqiza inombolo enkulu yabo:
Izingxube zobisi ezisekelwe kuphrotheni ye-soy. Sesivele sikhuluma ngabo ngenhla, ngakho-ke ngeke sikuchaze izindawo zabo.
Izingxube zokufakelwa kwezingane, ezenziwe ngamaprotheni ahlukaniswe ubisi lwezinkomo. Izingxube ezinjalo zishibhile kunalezo ezenziwa ngesisekelo seprotheyini. Kodwa zinezici ezifanayo. Ezingxenyeni ezinjalo, amaprotheni obisi abashintsha, ngakho angasetshenziselwa ukondla abantwana abahlukunyezwa yi-lactose noma i-allergenic dermatitis. Kanti, odokotela bezingane bancoma ukuthi banikeze labo abanokukhubazeka kokudla emathunjini, kanye nalabo abaphethwe yi-hypertrophy.
Izingxube zokufakelwa ze-Lactose ezingenalo i-Lactose zenzelwe lezo zingane ezihlushwa yi-lactose yesibili.
Ubisi lobisi lwezingane, olungenayo i-phenylalanyl. Zivele zingenakulinganiswa ezinganeni ezibhekene nesifo esibi-phenylketonuria. Lesi sifo senziwa ngenxa yokukhubazeka kokuzalwa kwamanye ama-enzyme aphethwe ukushintshaniswa kwe-phenylalanine. Lezi zinto zikhona esakhiweni se-molecule yamaprotheni. Njengoba isifo esinjalo, ingane isifo esibucayi esinamandla, okuholela ekutheni kuthuthukiswe engqondweni nangokwenyama. Isifo esinjalo sesifo samanje sesifo semithi esikhungweni sokubeletha, esibhedlela sokubeletha sezingane sihlolwe lesi sifo. Ukuqashwa okufika ngesikhathi okudlayo okuvumela ukuthi ingane iqhubeke nokuphila ngokugcwele.
Izingxube zokufakelwa ezinganeni ezinama-prebiotics. I-prebiotics yizinto ezikhethekile ezingagciniwe emathunjini, kodwa zenza ngcono ukukhula komntwana futhi zithinte amaqembu athile amabhaktheriya emzimbeni.
Izingxube zobisi ezinezikhuni ezikhethekile - i-polysaccharides. Izingxube ezinjalo zinqunyelwe izingane ezinesifo sokuvuselelwa njalo.
Ama-mixtures aqukethe i-triglycerides ephakathi. Izidokotela zabo zezingane zinikezwa izingane, okwejwayelekile ukugoma kwamathumbu emithineni kunzima kakhulu. Futhi, ukuxube okunjalo kunconywa kulabo ababhekene nezifo ze-pancreas, isibindi kanye ne-jelcheweres.
Namuhla okuhle kakhulu kubhekwa izingxube zezingane ezinjalo: Nutrilon, Nan, Nutrilak, Humana, Hipp no-Agusha.
Ukudla kwabantwana kwengane 6 izinyanga
Izinto zangaphandle ezizohlale zibonakala
Ikhukhamba elinosawoti elincane (ukupheka okusheshayo)
Izifundo zokwenza ama-eye-eyed
Iresiphi ye-strawberry ice cream
Ukungabi ne-calcium kwabesifazane: izimbangela
Siqala ukuthuthukisa uhlelo lwebhizinisi lokuphila nokusebenza
Isitshalo seNdlu Tradescantia
Viennese strudel - iresiphi engcono kakhulu nesithombe sikaKhisimusi
Ukuthukuthela ngemva kokushefa i-pubis
I-Omusoba - i-omelette yaseJapane
Kombucha ngokulahlekelwa isisindo
Lokho abesifazane abangafunda kumadoda